Maxey Dowladda Sucuudiga ka tiri khilaafka doorashada Soomaaliya? | Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Maxey Dowladda Sucuudiga ka tiri khilaafka doorashada Soomaaliya?
Maxey Dowladda Sucuudiga ka tiri khilaafka doorashada Soomaaliya?
Dowladda Boqortooyada Sucuudiga ayaa ka hadashay rabashadihii dhawaan ka dhacay Magaalada Muqdisho iyo ismariwaaga dhinaca doorashada ah ee u dhaxeeya dhinacyda Soomaaliya.
Wasaaradda arrimaha dibadda Sucuudiga ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in ay ka xuntahay dhacdooyinkii Jimcihii ka dhacay Magaalada Muqdisho dhinacyada Soomaalidana ugu baaqeyso in ay xaaladda dejiyaan.
“Waxaan si walaac ula soconaa, dhacdooyinka ka soo kordhay Jamhuuriyadda Federaalka ee aan walaalaha nahay ee Soomaaliya, kuwaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac kana dhacay caasimada, Muqdisho” ayaa lagu yiri.
“Waxaan adkeynaynaa ahmiyada in la dajiyo arimahana aan la kicin, waxaan rajaynaynaa in walaaluha Soomaaliya ku gaaran xalka wada wanaagsan iyada oo la wada hadlayo,taaso ilaalinaysa amniga Soomaaliya iyo deganashihisa shacabka walalaha ka fogeynay wax walba oo dhib ah”.
Sidoo kale waddamada Caalamka ee xiriirka la leh Soomaaliya ayaa muujiyay sida ay uga walaacsanyihiin xaaladda Soomaaliya oo wal wal ku abuureysa rabshadaha soo cusboonaaday.
Mareykanka oo mar kale u digay muwaaddiniintiisa jooga Muqdisho
C/Raxmaan C/Sahkuur: " Marna Maangal maaha in shir doorasho lala galo Ninka Madaxweynayaashii hore weeraray"